कस्तो छ विदेशी लगानीकर्ताको अवस्था नेपालमा ? - EKalopati
कस्तो छ विदेशी लगानीकर्ताको अवस्था नेपालमा ?
काठमाडाैं । नेपालमा विदेशी लगानी कर्ताहरू यसै पनि लगानी गर्न डराउँछन् । कोरोना महामारी सुरू भएपछि थोरै मात्रामा भएका विदेशी लगानीकर्ताहरू पनि एक किसिमले मारमा परेका थिए । सरकारले लगानीमैत्री कार्यक्रम बनाउन नसक्दा लगानीकर्ताहरूमा एक किसिमको निरासा छाएको छ ।
हालसम्म पनि लगानीकर्ताको लागि महामारीको ह्याङ सकिएको छैन । सङ्क्रमणका कारण नेपाल भित्रने विदेशी लगानी पनि प्रभावित भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को आर्थिक तथा वित्तीयसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा विदेशी लगानीमा सामान्य मात्रामा वृद्धि भएको देखिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा १९ अर्ब ९० करोड रुपियाँ विदेशी लगानी भित्रिएको छ। यो आव २०७६/७७ को तुलनामा केवल १.२ प्रतिशतले मात्र बढी हो। गोरखापत्रमा खबर छ । उक्त आवमा नेपालले १९ अर्ब ६७ करोड रुपियाँ विदेशी लगानी भित्र्याएको थियो। विश्व अर्थतन्त्र नै कोभिड–१९ का कारण आक्रान्त बनिरहेको अवस्थामा नेपाल भित्रने लगानी पनि बढ्न नसकेको हो।
Previous articleकाबुलमा तनावकैबीच पनि उद्धार कार्य जारी राख्ने अमेरिकाको घोषणा
Next articleमन्त्री नियुक्तिका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डबीच भेट